Qoor-Qoor oo maanta dib ugu laabanaya Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-Qoor oo maanta dib ugu laabanaya Muqdisho
MadaxweynahaDowlada Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, ‘Qoorqoor’ ayaa maanta dib ugu soo laabanaya Magaalada Muqdisho, kadib saacado kooban uu ku sugnaa Caasimadda Galgaduud ee Dhuusamareeb.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, ‘Qoorqoor’ayaa la filayaa inuu galinka hore ee maanta ku laabto magaalada Muqdisho, kadib in ka yar 20 saacadood uu ku sugnaa xarunta maamulka uu Madaxweynaha ka yahay.
Kadib cadaadis sharci ah oo kaga yimid Dastuurka Galmudug oo dhigaya in Madaxweynaha Maamulka uusan degaannada uu Madaxda ka yahay ka maqnaan karin wax ka badan 45 cisho, ayuu Qor-qoor dib shalay ugu laabtay Dhusamareeb si uu u soo cosbooneysiiyo muddada maqnaanshiyaha.
Qoor-qoor ku dhawaad 50-ka cisho ee uu ka maqnaa degaannada Galmudug waxa uu kusoo qaatay dalka Turkiga halkaas oo isaga iyo Madaxwenaha maamulka Koofur Galbeed Lafta-Gareen, ay ku joogeen qorshe ay abaabushay Madaxtooyada Soomaaliya si loo cuuryaamiyo wadahadallo xiligaas loo ballansanaa oo la xariira doorashooyinka dalka.
Dib ugu laabashada Qooq-qoor ee Caasimadda dalka ayaa la xariirta shirka aan rasmiga ahayn ee Madaxda Dowladda Fadaraalka ee waqtigu ka dhamaaday iyo kuwa Maamul goboledyadu ku leyihiin Xerada Xalane, si loogga heshiiyo ajandaha shirka Wadatashiga Qaran ee loo ballansan yahay.
Shirkaan oo hordhac u ah, shirka weyn ee Wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya qaban qaabiyeen, ayaa la filayaa inuu maanta mar kale ka billowdo teendhada Afisyooni kadib labo maalin oo nasiino ah.